မင်္ဂလာအနာဂတ်မိဘများများသောအားဖြင့်သူမ၏ကလေးများအတွက်ဖှဲ့ရွေးချယ်ရာတွင်, သားသမီးရဲ့စတိုးဆိုင်၏အကွာအဝေးစဉ်းစားရန်ပျော်ရွှင်ကြသည်။ moms သငျသညျမရမယ့်ကလေးတွေအဘို့ထုတ်ကုန်များ၏ကြီးမားသောအကွာအဝေးအတွင်းအရှေ့တိုင်းမှမရှိဘူး, ပိုမိုအတွေ့အကြုံရှိသူငယ်ချင်းများနှင့်တိုင်ပင်, အင်တာနက်ပေါ်မှာသတင်းအချက်အလက်ကိုလေ့လာနေကြသည်။ ဥပမာ, ပုံမှန်ထက် cots စတိုးဆိုင်များအပြင်, မွေးကင်းစကလေးများအတွက်ပုခက်နေတဲ့ပုခက်နှင့်တွေ့ဆုံရန်နိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားဒီဇိုင်းများဧကန်အမှန်အလားအလာမိဘများ captivate ထက်အဆင်းလှသောအသွင်အပြင်, အဆင်ပြေလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအမျိုးမျိုး, နည်းနည်းအာကာသကိုတက်ယူ, ရှိသည်။ တစ်ဦးမွေးကင်းစတစ်ပုခက်ရှိမရှိဒါမှမဟုတ်သင်ကလိုအပ်ပါတယ်မပါဘဲလုပျနိုငျ၏ရသေးအများအပြားဒုက္ခဆိုတဲ့မေးခွန်းကို။ ဒီမေးခွန်းအတွက်အဖြေတစ်ဦးချင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ရပါမည်နှင့်ဤအဘို့အကြှနျုပျတို့သညျဤသားသမီးရဲ့ပရိဘောဂများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုစဉ်းစားရပေမည်။
ကလေးငယ်များအတွက်သယ် cots အမျိုးအစားများ
၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်း features တွေရှိပါတယ်တစ်ခုချင်းစီ၏ပုခက်အတော်ကြာလူကြိုက်များမော်ဒယ်များရှိပါတယ်:
ကုလားထိုင်အဖျားခတ်ပုခက် - ခြေရင်းမှအဖျားခတ်ပုခက်မကြာခဏထိုကဲ့သို့သောမော်ဒယ်များအတွက်အမြင့်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်, ဘီးပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကလေးများအတွက်အီလက်ထရောနစ်အဖျားခတ်ကုလားထိုင်ခေတ်မီအီလက်ထရောနစ်စနစ်များကိုတပ်ဆင်ထားသည်, task ကို mom, လွယ်ကူချောမွေ့စေနိုင်သည်, ဥပမာ, တုန်ခါမှုငိုတဲ့အခါဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုအော်တိုရွေ့လျားမှုအနာရောဂါဖြစ်နိုင်ပါသည်ရှိသေး၏။
ကလေးခေါက်ခုတင်သယ်ဆောင် သင်တိုက်ခန်း၌သင်နှင့်သင်၏ကလေးသယ်ပေးတယ်, နှင့်လသာဆောင်တခုတခုအပေါ်မှာနေ့လည်ခင်းမောအိပ်ဘို့ကိုယ်နှိုက်ကသက်သေပြခဲ့သည်။
မွေးကင်းစတစ်ပုခက်ကိုဝယ်ခြင်းငှါအဘယ်အရပ်မိဘများမကြာခဏတွေးမိ? Options ကိုလက်ရှိတာ။ ဒါဟာနှစ်ဦးစလုံးသားသမီးရဲ့စတိုးဆိုင်များနှင့်ကလေးများရဲ့ပရိဘောဂနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများရောင်းချကြောင်းအွန်လိုင်းစတိုးစေနိုင်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်, ထုတ်ကုန်များပိုမိုကျယ်ပြန်အကွာအဝေး, ပိုကောင်း။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်, navigate နှင့်ရွေးချယ်တဲ့အခါအဘို့အကြည့်ဖို့ရာပေါ်ဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲအမျိုးမျိုး၌တည်၏။ မွေးကင်းစတစ်ပုခက်ဝယ်ယူအောက်ပါအရေးကြီးသောအချက်များကိုမှတ်မိ:
အဆိုပါပုခက်ထဲမှာနောက်ထပ် features တွေအများစုကုန်ကျစရိတ်အတွက်တိုးထိခိုက်စေပေမယ့်သူတို့ထဲကအချို့လုပျနိုငျစရာမလိုဘဲ။ ဒါဟာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကပေမယ့် features တချို့ကိုပြင်, စျေးနှုန်းချိုသာမော်ဒယ်များအာရုံစိုက်ဖို့သဘာဝကျပါတယ်, ကောင်းစွာစဉ်းစားရန်လိုအပ်;
မွေးကင်းစများအတွက်အရွယ်အစား bassinet ဆိတ်တို့၏စောင့်ရှောက်မှုပေးရန်ကစားပေးရလှုပ်ရှားမှုနှင့်မိခင်ထိခိုက်ဘူးပါစေသင့်သည်,
သော့ခတ်နိုင်တဲ့ယန္တရား Swing ရှိပါတယ်တဲ့မော်ဒယ်ရွေးချယ်ဖို့ကောင်း၏။
ဒါ့အပြင်ကပုခက်ကလေးမွေးဖွားထံမှကလေးနှင့်6လ (ထုတ်လုပ်သူများကကြေညာအသက်) အထိဒီဇိုင်းပြုလုပ်နားလည်သဘောပေါက်ရပါမည်။ သို့သော်အလေ့အကျင့်အတွက်, အထူးသဖြင့်သင်တစ်ဦးတက်ကြွကလေးငယ်ကြီးထွားလာရှိပါက, စားခွက်ဖို့စားခွက်ကိုပြောင်းလဲအများကြီးအဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသောရှိသည် -4လတွင်။
7 လအတွင်း child - ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အစားအစာ
မွေးကင်းစအတွက် Intracranial ဖိအား
ဘယ်နှစ်ယောက် 1 လအတွင်းကလေးအိပ်ပျော်နေသော?
ကလေး9လ - ကြောင်းအစာကျွေးခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဘယ်လို, ကလေးနိုင်သနည်း
Mackerel - ချက်ပြုတ်နည်းများ
ကီဗင်ဟတ်၏မယား Eniko Parrish ကလေးငယ်တစ်မျှော်လင့်
Multivarka အတွက် Semolina - စာရွက်
အနာနွားသငယ် - အဘယ်သို့ပြုသနည်း
လျင်မြန်စွာပြုမူဆက်ဆံဖို့ဘယ်လို - နှုတ်ခမ်းပေါ်အေး?
မီးဖို၌ roasting များအတွက်ကြက်ဆင်စိမ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
တင်းကျပ်စွာ leggings - အရှိဆုံးဖက်ရှင်အမျိုးသမီးမော်ဒယ်များ
Heder - အိမ်မှာစောင့်ရှောက်မှု
တိုင်းရင်းသားရေးရာစတိုင် - တိုင်းရင်းသားစတိုင်အတွက်ဖက်ရှင်လေးကိုအတွက်လျှို့ဝှက်ချက်များ
ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အ Ciara နှင့်စယ် Wilson က 10 လသားအရွယ်သမီးပြသ
ဂျက်စီကာ Simpson ရဲ့ခင်ပွန်းကထိန်းနှင့်အတူသူမ၏အပေါ်ကိုလိမ်တာ